Koriyaa Kibbaatti loltuun saala jijjiiratte, har'iamuusheef waraana biyyattii himachuuf jirti - BBC News Afaan Oromoo
Koriyaa Kibbaatti loltuun saala jijjiiratte, har'iamuusheef waraana biyyattii himachuuf jirti
Loltuun Kooriyaa Kibbaa saalashee jijjiirte waraanni biyyattii hojii isheerraa ari'uusaatiin nan himadha jette.
Byun Hui-soo, kan ganni 22, wayita waraana biyyattiitti dabalamu dhiira ture. Bara dabre keessa garuu sababa saala ofii fudhachuu dhiisuun (gender dysphoria) fi fayyaa sammuun walqabatee, saala geeddaruun dubartii taate.
Waraana biyyattii garee lakkoofsaan bicuu taheef "loogii hidda fageeffate" qaba jechuun himatte.
Kooriyaan Kibbaa akkuma biyyoota hedduu addunyaa kanaa, dhimma saalaan walqabateerratti ni cichiti.
Taateen Byun kun dhimmi tajaajila warra saala geeddaratanii mataduree haasawaa akka tahu karaa baneera. Akkasumas ilaalcha warra jaalattoota saala fakkaatu (LGBTQ) irrattis dubbiin akka godhamu taasiseera.
Dhiironni Kooriyaa Kibbaa fayya-qabeessa tahan hundi, waggoota lamaaf loltummaan akka tajaajilan irraa eegama.
Byun Hui-soo maal jette?
Ibsa daqiiqaa 45f tureen, loltuun kun erga yaaliin baqaqsanii hodhuu taasifameefii booda, waraana keessa itti fufuu barbaaddee akka turte duubbatte.
Yaalii kanas kan taasifte bara dabre keessa biyya Taayilaanditti ture.
''Hangan waraana keessatti deebiyee tajaajilutti, falmachuu koo ittan fufa,'' jette. Hanga xumuraattis murtee kana nan morma -haga Mana Murtii Olaanaatti,'' jette.
'Seera haaraa namoota saala dhiiraa fi dhalaa qabaniif'
Barnoonni sirna saal-quunnamtii mormii kaase
Yaalii saalashee jijjiiruu kana taasisuuf karoora hinqabuun ture. Doktoroota hospitaala waraanaa keessaatu yaalii kana akkan taasisu natti himan jetti.
Hospitaala kanas kan dhaqxe rakkoo fayyaa sammuutiin akka tahes dubbatti - kunis 'gender dysphoria' kan jedhamudha.
Rakkoon kun saala qaamaan jiruufi saala sammuu keessa jiru gidduutti waldhabdee keessoo uumamuun kan mudatudha.
''Eenyummaa saalaa koo qofa osoo hin taane, loltuu biyya kana daangaashee kabachiisan keessaa ishee cimtuu tahee agarsiisuun barbaada,'' jette.
Waraanni biyyattii hoo maal jedhe?
Murtee dabarseen, waraanni ''dhimmichi haalota tajaajila waraanaa keessaa hin fufsiisne qaba," jedha.
Dubbi-himaan Ministeera ittisa biyya AFPtti waan himan, ''loltuun kun hospitaala waraanaa keessatti qorannoo gaggeessaa jirti. Kanaanis qaama saalaa dhiiraa ofirraa dhabuun, qaama miidhamummaa qaamaa fi sammuudha jechuun gabaaseera,'' jedhan.
Kanaanis koreen haa tajaajiltuufi haa dhiistuu kan jedhu ilaaluu eegale. Waraanni biyyattii seera tajaajila loltoota saala geeddaratanii ittiin to'atu hinqabu.
Ibsi waraanaa kun dabaluun ''waraanni biyyattii qoolliifannaa fi qabiinsa hin malle hambisuuf kutannoon hojjechaa jira,'' jedha.
Mirga Saba lakkofsaan xinnaa
Jaalattoota saala walfakkaatuu
Jarman namoota saala dhiiraa fi dhalaa qabaniif seera haaraa baaste
'Warri saala wal-fakkaataa dawwannaaf Itoophiyaa dhufuu hin qaban'
Gaanaatti barnoonni sirna saal-quunnamtii mormii kaase